Isikhungo URobert F. Kennedy Uvuza uTim Cook Ngomsebenzi Wakhe | Ngivela kwa-mac
Isikhulu esiphezulu sakwa-Apple uTim Cook sizoqoqa umklomelo wobuntu enhlanganweni esungulelwe ukuhlonipha elinye lamaqhawe akhe, URobert F. Kennedy.
Isikhungo sikaRobert F. Kennedy Sezobulungiswa Namalungelo Abantu sizoklonyelisa uTim Cook ngeRipple of Hope Award, okungukuthi, into efana nomklomelo i- "Ray of Hope". UDisemba 8 usuku olukhethwe ukugubha lo mcimbi ngo ukuqashelwa komsebenzi wabo ngokuvumelana noshintsho kwezenhlalo okuzokwenzeka eNew York Hilton enkabeni yeManhattan.
Lo mcimbi wemiklomelo uzohanjelwa nangabanye abantu abanjengoCongressman John Lewis, IGeorgia Democrat kanye nesishoshovu ngesikhathi sokulwela amalungelo abantu ngeminyaka yama-1960. Kuzophinde kube khona umsunguli obambisene nowe-Evercore futhi owayenguNobhala Wezezimali uRoger Altman kanye neNxusa le-UNESCO uMarianna Vardinoyannis.
Isikhulu esiphezulu sakwa-Apple sesiphenduke inkampani eqinile gqugquzela ukulingana emsebenzini, bethi izinkampani ziyahlomula lapho abasebenzi bazo uzizwe wahlonishwa ngokuphelele. Ngamazwi akhe ashicilelwe ku-athikili ye-Wall Street Journal:
Kwa-Apple, sizama ukuqinisekisa ukuthi abantu bayakuqonda ukuthi akudingeki ukuthi badalule ubunikazi babo ngokushesha nje lapho bengena emnyango […] Sizibophezele ekwakheni indawo yokusebenza ephephile neyamukelekayo yabo bonke abasebenzi, ngaphandle kobuhlanga, ubulili, ubuzwe noma ubulili.
UTim Cook, owaveza obala ngonyaka odlule ukuthi uyisitabane, wasola umthetho wase-Indiana "wenkululeko yenkolo" owawusatshwa kuzoholela ekubandlululweni kwabobulili obufanayo nabobulili obufanayo. Isishayamthetho sombuso kamuva sachibiyela umthetho owenqabela ubandlululo olususelwa ekuziphatheni komuntu ngokobulili noma ngobunikazi bobulili.
Kakade ekuqaleni konyaka, uCook wayeseklonyeliswe ngendawo ethi »Visibility Award from the Human Rights Campaign», inhlangano enkulu kunazo zonke ye-LGBT Amalungelo Omphakathi e-US
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » URobert F. Kennedy Human Rights Foundation Wethula Umklomelo We "Ripple of Hope" kuTim Cook